अस्ट्रेलियाबाट ‘मल्टिपल भिषा’ थप्न बाली जाँदै हुनुहुन्छ? होस् गर्नुस्, जे'ल पुगिएला -
अस्ट्रेलियाबाट ‘मल्टिपल भिषा’ थप्न बाली जाँदै हुनुहुन्छ? होस् गर्नुस्, जे’ल पुगिएला
केही दिन बाली बसेपछि पुनः अस्ट्रेलिया फर्कन लाग्दा उनलाई अस्ट्रेलियाको अध्यागमनले समायो। अध्यागमनले तुरून्तै उनको मोबाइल र अन्य बिषयको जाँच गर्‍यो र तुरन्तै भिषा रद्द गरेर नि’यन्त्रणमा लियो।
तर यस पटक भने अस्ट्रेलियन प्रहरीले बाली ट्रान्जिटलाई केलाउने र मल्टिपल भिषाका नेपालीलाई छ’ड्के नजरले हेर्न थालेपछि रमेश प’क्रा’उ परेका हुन्।
पछिल्लो हप्ता रमेश प’क्रा’उ परेर प्रहरी हिरासतमा रहँदैगर्दा फेरी यो हप्ता एक नेपाली महिलालाई अध्यागमनले आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको छ। उनले पनि पुनः अस्ट्रेलिया प्रवेशका लागि रमेशको जस्तै उपाय लगाएकी थिइन्।
यसरी हप्तैपिच्छे नेपाली प’क्रा’उ पर्न थालेपछि भिषाका लागि बाली ट्रान्जिटको उपयोग नेपालीको लागि ख’तर’नाक हुने देखिएको छ।
चेकजाँचका क्रममा अस्ट्रेलियाको अध्यागमनले रमेशको मोबाइलमा काममा आवेदन दिएको ज प्रमाण फेला पारेको थियो भने दोस्रो महिलालाई पनि काम गरेको आधार संकेत गर्ने जानकारी भेट्टाएको थियो। भजिट भिषामा आएर काम गर्नु गैर कानुनी हो र उनीहरू दुबै यसैको आधारमा ‘प’क्रा’उ परेका हुन्।
यसरी बिमानस्थलको अध्यागमनमा प’क्रा’उ गरिएकाहरूको भिषा र’द्द गरिन्छ।
यसरी भिषा र’द्द गर्नेबित्तिकै कुनै पनि मुलुकका नागरिक बिना प्रवेशाज्ञा बस्न नमिल्ने कानुनी प्रावधानलाई अनुसरण गर्दै प्रहरीले त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई नि’यन्त्र’णमा लिने गर्छ।
प्रहरी नि’यन्त्र’णमा हुने व्यक्तिले कम्तिमा १० हजार डलर ध’रौटी राखेर बाँकी बक्यौता काम र सर सामान मिलाएर फर्किने सर्तमा रि’हा हुन सक्छ तर त्यत्रो पैसा तिरेर बाहिर निक्लनुको कुनै अर्थ भने रहदैन।